टिप्पणीः मधेशमा आगो, काठमाडौंमा फूलमाला
काठमाडौ – प्रमुख तीन दल (काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी) र एक राप्रपा नेपालसहितले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति बाँडफाँड गरिसकेका छन् । नयाँ सविधान, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सबै बाँडफाँड गरी तीन दलले लिएका छन् । कात्तिक १४ गते एमाओवादीले एकजना उपराष्ट्रपति भित्र्याउनेछ । काँग्रेसले कुनै पद नपाएपनि विपक्षीको ..
नेपालको लगानी बोर्डमा बेलायती संस्थाको ‘जासुसी’
काठमाडौं – अन्तराष्ट्रिय सहायता नियोग (डिएफआडी) नेपालमा लगानी र सहयोग गर्ने ठुला दातृ निका..
शीतलनिवास टु बागडोल : तस्विरमा हेर्नुहोस् निवर्तमान राष्ट्रपति बस्ने भाडाको घर
काठमाडौं – नयाँ राष्ट्रपतिको चयनसँग निवर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादव शीतलनिवास छाडेर भाडाक..
सेरोगेसी प्रकरण फेरि अदालतमा पुग्यो, करोडौको चलखेल
काठमाडौं– विवादास्पद सरोगेसी प्रकरण फेरि अदालतमा प्रवेश गरेको छ । नेपालस्थित विदेशी एजेण्ट..
बहस : बाउले यु–१६ खेल्दा छोराले हुटिङ गर्ने !
फुटबल खेललाई नियमित फलो गर्ने नेपालीमाझ एउटा जोक निकै चर्चामा छ– बाउले यु–१६ खेल्दा छोराले..
नेताको दशैँ : कोहीलाई आन्दोलनको चिन्ता, कोही जिल्लावासीसँग दुःखसुःख साट्दै
दाइ र सासुआमासँग टीका थाप्छु : ठाकुर गैरे, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले म भोलि पाल्पा जाँदै छु । गाउँमा विभिन्न क्लब, पार्टीका स्थानीय कमिटीका कार्यक्रम छन् । त्यसमा व्यस्त हुन्छु । मुख्यतः यसपालिको दशैँ–तिहारको मुखमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेर भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ, यहीबारे बहस हुन्छ । दशैँमा दाइ र सासुआमाको हातबाट ..
कसरी मनाउँदै छन् खेलाडीले दशैं ?
काठमाडौं– हिन्दूहरुको महान् पर्व दशैं–तिहार नजिकिँदै छ । नेपालीलाई दशैंको चटारोले छोपिसकेको छ । भूकम्पको पीडा र नाकाबन्दीको असरलाई केही दिन भए पनि भुल्दै मनाउन लागिएको दशैं विगतका वर्षहरूको जस्तो हर्षोल्लासपूर्ण पक्कै हुनेछैन । तर पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका घर–आँगन दशैंको स्वागतका लागि सिँगारिँदै छन् । सर्वसाधारणदेख..
दिल्लीको नजर शीतलनिवासतिर
काठमाडौं– संविधान निर्माण र नयाँ सरकार गठनसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा देखिने गरी तीन धक्का खाएको दक्षिण छिमेकी भारतले नयाँ गेमप्लान अगाडि सारेको छ । उसको नयाँ गेमप्लान यसपालि शीतलनिवासको कुर्सीमा आफूअनुकूल पात्रलाई बसाउने छ । कूटनीतिक मामलाका जानकार भन्छन्, ‘शीतलनिवासमा आफ्नो पकडका लागि दिल्लीको मुभ सुरु भइसकेको छ, जसरी हिजो राष्..
बहस : खेलौनाको अपार्टमेन्ट लिएर कसरी बाँचून् खेलाडी ?
नेपाली खेलाडी मैदानमा चुक्दा दर्शकको प्रायः एउटै टिप्पणी रहन्थ्यो– बिचराहरूले कसरी खेलून्? खेलाडीको आर्थिक अवस्था र समस्याबारे नेपाली दर्शक पनि राम्रै जानकार छन् । किनकि, छिमेकी देश भारतमा लिग खेल्ने खेलाडीले प्राप्त गर्ने र हाम्रोमा लिग खेल्ने खेलाडीले प्राप्त गर्ने तलब–सुविधा र पुरस्कार रकममा आकाश–जमिनको फरक छ । यस्तोमा नेपाली..
एमालेमा पस्यो भद्र–सहमतिको विवाद
काठमाडौं – सत्ता साझेदारीमा कांग्रेसले भद्र–सहमति कार्यान्वयन नगरेको बहस जारी रहँदा एमालेभित्र आन्तरिक भद्र–सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको मत उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक भद्र–सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधरले गुनासो गर्न थालेका छन् ।..
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीलाई ५ दिनमा ८ धक्का
काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको चार दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को धक्काको महसुस गर्नुपरेको छ । यस्ता धक्काले शुरुबाट नै ओली नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब पर्ने खतरा बढेको छ । धक्का – १ दोस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि सात बुँदे सहमति गरेर काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाई प्रधानमन्त्री बनाएका एमाले अध्यक्ष क..
कानुनमन्त्रीमाथि एमालेबाटै उठेका प्रश्न
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा पार्टीका इमान्दार र पुराना नेता छाडेको भन्दै एमालेभित्र आलोचना भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अग्नि खरेलका विषयमा लिएर प्रधानमन्त्री एव्म पार्टी अध्यक्ष ओलीको एमालेभित्र आलोचना भएको हो । एमालेका केही सभासद्ले खरेलको मन्त्रीपरि..
जसले रोके विष्णु पौडेललाई
काठमाडौं– सोमवार विहान ९–१० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीसगै उपप्रधानमन्त्री एव्म अर्थमन्त्रीका रुपमा रुपन्देही–४ बाट निर्वाचित नेता विष्णु पौडेलले सपथ लिने तय भएको थियो । यसै अनुसार एमाले उप–महासचिव समेत रहेका पौडेल सपथ लिदा लगाउने पोशाकको तयारीमा जुटेका थिए । तर, १२ बजेतिर परिस्थिति बदलियो र पौडेल मन्त्री हुन पाएनन् । दुई–तीन..
पदमुक्त राष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाख १० हजार र दूधालु गाईसहितको सुविधा चाहियो
काठमाडौं– एक महिनाभित्र शीतल निवास छाडनुपर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चाहिने सुविधाबारे राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ । ‘पद–निवृत्त राष्ट्रपतिका लागि सुविधा प्रबन्धबारे’ शीर्षकमा मुख्यसचिवलाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्र..
भारतलाई ३ धक्का १ सफलता
काठमाडौं– संविधान निर्माण र नयाँ सरकार गठनसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा दक्षिण छिमेकी भारतलाई देखिने गरि तीन धक्का खानु परेको छ । तीन धक्का आएको भारतलाई भने एउटा सफलता मिलेको विश्लेषण हुन थालेको छ । राजनीतिककर्मी तथा कुटनीतिक क्षेत्रका मानिसहरु अनौपचारिक कुराकानीमा दिल्लीले खाएको धक्कामाथि बताउँन थालेका छन् । उनीहरुसँग भएका अनौपचार..
प्रतिष्ठित परिवारले किन लुकाउँछन् मानसिक रोग ?
सुस्मा (नाम परिवर्तन) सहर नजिकै पर्ने एक गाउँमा जन्मिहुर्केकी किशोरी हुन् । शिक्षित पितालाई तिनको जन्म हुँदा सन्तान लाभको सन्तोष थियो, छोरी जन्मेकोमा खिस्स हुनेहरू पनि नभएका होइनन् । बाबु जति नै प्रगतिशील भए पनि र समयले जति नै काँचुली फेरे पनि भाइ सुभान निजी स्कुलमा पढ्थे भने सुस्मा सरकारीमा । सुभान स्कुलको होमवर्क सिध्याएर [&he..
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा संसद भवनमा जे देखियो (फोटोफिचरसहित)
काठमाडौं– संसद भवनको दृश्य सधैं एकनासे हुँदैन र भएन । इतिहास लेख्ने दिनमा उल्लासमय बन्दै आएको संसद भवन ३८ औं प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जुटिरहँदा त्यसभित्र र बाहिर उल्लासका छालहरु छचल्किरहे । खुसीका बावजुद केही निराशा र केहि घोचपेचका दृश्य पनि देखिए । तर, ति सवैलाई उत्साहले किचेको थियो । प्रचण्ड–ओली र गच्छदारको लामो बैठक नयाँ प्..
काठमाडौं–एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका अर्का प्रत्यासी सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा आज भएको मतदानमा ओली ३३८ मतका साथ विजयी भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का प्रत्यासी कोइरालाले २४९ मत प्राप्त गरे । प्रधानमन्त्रीको चमयनका लागि संसदमा जम्मा ५८७ मत खसेको थियो । एम..
संविधानसभाका ८ बर्षमा ५ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री
काठामाडौं – पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट पछिल्लो ८ बर्षमा देशमा पाँच कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पछिल्लो पटक काग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई हराएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने हुने पाँचौ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यद्यपी असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविध..
सहकार्य तोडेर सुशील मैदानमा उत्रनुका यी हुन् आठ कारण
काठमाडौं –शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदमा आज हुने नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भिडदैछन् कोइरालाको उम्मेदवारीसँग संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनीबीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । योसँगै दलहरूले संविधान..
जाममा फसे एमालेका हजारौं नेता
काठमाडौं– कांग्रेस, एमाओवादीको तुलनामा नेकपा एमालेको संगठन धेरै राम्रो छ । समयमा महाधिवेशन गर्ने तल्लो तहदेखि पार्टीको संरचना पनि अरु पार्टीको भन्दा एमालेको राम्रै देखिएको छ । केपीशर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि पनि निर्धारित समयमा तल्ला तहको अधिवेशन गर्नेजस्ता काम भए । तर केही राजनीतिक कारणले अहिले एमालेको केन्द्रीय कमिटी, वि..
‘मिसन–२९९’ मा ओलीको दौडधुप
काठमाडौं – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि सात दिने समयसहित आह्वान गरेपनि दलहरुले त्यसमा कुनै प्रगति गर्न सकेनन् । १५ गते भएको राष्ट्रपतिको आव्हानको समयसीमा २१ असोजमा सकिएको छ । सहमतिय सरकार गठनको समयसीमा समिएलगत्तै शुक्रवारदेखि नै बहुमतिय प्रक्रिया शुरु भएको छ । बहुमतिय प्रक्रिया शुरु ह..
३ मन्त्री ३५ विवाद
काठमाडौं– सुशील कोइराला सरकारमा एमालेमन्त्रीहरू सबैभन्दा बढी आलोचित भए । सरकारमा सहभागी एमालेमन्त्रीलाई कहिले पार्टीले फिर्ता बोलाउनाले, कहिले आफ्नै व्यवहारले त अन्तमा जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बर्खास्त गरेर आलोचित भए । तर, एमालेमन्त्री मात्रै खराब भन्ने होइन । कांग्रेस कोटाकी एउटी मन्त्री चित्रलेखा यादव पनि आलोचित बनिन..
नयाँ सरकारबारे कमल थापाको ३ फरक ‘रोडम्याप’
काठमाडौं– २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकार बाहिर रहँदै आएको राप्रपा नेपाल यो पटक भने नयाँ सरकारबारे तीन फरक रणनीतिका साथ मैदानमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको छ । नयाँ संविधानमा राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका उसका मुद्दाहरुको कुनैपनि रुपमा सुनुवाई नभएपनि संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन गरेको राप्रपा नेपाल यसअघिको आफ्नो सरक..
एमाले मन्त्रीको मार्कसिट : को पास को फेल ?
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरूको सूची बुझाउँदा अहिलेका पार्टी केन्द्रीय कार्यालयसचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि सँगै थिए । श्रेष्ठका अनुसार हातमा एमाले मन्त्रीहरूको सूची परेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला झसंग भएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रीको सूची हेर्दै भने, ‘मलाई असफल बनाउन थाल्नुभएको हो..